Journalism Events – NMDC
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှာအစပြုခဲ့တဲ့ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံကျော်ကို ကူးစက်ပျံနှံလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဝူဟန်ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ ကူးစက်နိုင်သလဲ၊ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိ ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်သလဲ ၊ ဘယ်လို ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်လို့ ရသလဲ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သတင်းအတတ်ပညာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများက Hello ဆရာဝန်မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်းနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားပါတယ်။ wuhan [...]
Tuesday February 25th, 2020 By NMDC Editor Journalism Events, News, NMDC TV Comments Off
Tuesday January 21st, 2020 By NMDC Editor Journalism Events, News and Events Comments Off
Wednesday May 29th, 2019 By Editor Journalism Events, News, News and Events Comments Off
Saturday March 2nd, 2019 By Editor Journalism Events Comments Off
NMDC မှာ BBM (Bachelor of Business Management), EPP (English for Professional Purposes), BTHM (Bachelor of Tourism and Hospitality Managemet) , နဲ့ JNL (Bachelor of Journalism) ဆိုပြီးမေဂျာ လေးခုရှိပါတယ်…. ယင်းမေဂျာလေးခုမှာ အခုလက်ရှိ နှောက်ဆုံးနှစ်တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ ရင်ခုန်သံလေးများကို ဒီvideo လေးမှာ မျှဝေပေးထားပါတယ်…….. မကြာခင်မှာ ကျောင်းပြီးတော့မဲ့ Final year မှ စီစီတို့ [...]
Sunday September 2nd, 2018 By Editor Journalism Events, News and Events Comments Off
Monday August 27th, 2018 By Editor Journalism Events, News and Events Comments Off
Monday August 20th, 2018 By Editor Journalism Events, News, News and Events #NMDC Comments Off
Wednesday August 8th, 2018 By Editor Journalism Events, News, News and Events Comments Off
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့် ကျောင်းသားလေးနှစ်ဦး NMDCကိုဘယ်လိုသိခဲ့လဲ။ ဒီကျောင်းသား ၂ဦး NMDC ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာရိုက်ကူးထားပါတယ်။ NMDC မှာဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့လဲဆိုတာ…………… လာမယ့် ၉ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ့် NMDC ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ Open Campus အခမ်းအနား ကိုတက်ရောက်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ Journalism final year ကျောင်းသားတွေရိုက်ထားတဲ့ Video လေးကို အောက်က link မှာဝင်ပြီး ကြည့်လိုက်နော်….
Friday August 3rd, 2018 By Editor Journalism Events, News and Events Comments Off
NMDCVSF Workshop Facilitators
NMDC Virtual Student Forum Wednesday July 1st, 2020
NMDCVSF Workshop Facilitators Wednesday July 1st, 2020
NMDC Virtual Student Forum Monday June 29th, 2020
NMDC Virtual Student Forum Day2Monday June 29th, 2020
NMDC Virtual Student Forum Day(1) Monday June 29th, 2020
NMDC Virtual Student Forum ဖွင့်ပွဲတွင် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီ ကောလိပ်၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါက်တာတင်တင်ထွေးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း Monday June 29th, 2020